चन्द्रमणि भट्टराई | २०७६-०१-०५ | ५९५६ १३
सामुदायिक बिद्यालयमा स्वच्छता कायम गराउन तथा सफाइको अवस्थामा सुधार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा
काठमाडौं । कम लगानी र थोरै समयमा कम्तीमा ४० बर्ष आयु भएका धेरै शौचालय निर्माण गर्न सकिनेमा जोड दिँदै स्वच्छता र सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरुले काठमाडौंमा यो प्रविधि उपयुक्त भएको बताएका छन् । छेउ छेउमा धातुका प्यानल र बीचमा पोलिआइसोस्यानोरेट (पिआइआर) बस्तुको प्रयोग गरेर बनाएको पर्खाल हुने यस प्रकारका शौचालयहरु आगो, पानी र आवाज प्रतिरोधी हुनेछन् । यो प्रविधिबाट महानगरको वडा १३ क्षेत्रमा पर्ने जनप्रभात माध्यमिक बिद्यालयमा ८ कोठे शौचालय जडान गरिएको छ । बिहीबार यी शौचालयको शुभारम्भ गर्दै संघीय संसद सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले सहरी सुबिधाका लागि आफूलाई यस प्रकारको प्रविधि उपयुक्त लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सहरको सफाइका लागि पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हुनुपर्छ । यससँगै त्यहाँबाट उत्पादन भएको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यति गर्न सकिएन भने भोलि यसबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा क्षति पु¥याउने ठूलो समस्या सृजना हुनेछ भन्ने हामीले अहिले नै सोच्नुपर्छ । संसद श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
यी शौचालयहरु खानेपानी तथा ढल निकास बिभागको संयोजन, सामाग्री उत्पादन गर्ने भारतीय कोबास्ट्रो प्रा. लि. नामक कम्पनीको सहयोगमा गुथिले निर्माण गराएको हो । गुथिका प्राबिधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्यका अनुसार — निर्माण समय, लागत र निर्माण सामाग्रीका आधारमा यी स्मार्ट शौचालय हुन् । ४ वटा पुरुष र ४ वटा महिलाका लागि तयार पारिएका यी शौचालय अपाङ्गमैत्री छन् । अमात्य थप्दै भन्नुहुन्छ — आवश्यकता अनुसार यसमा, आफैं पानी आउने, मान्छे पसेपछि आफैं बत्ती बल्ने र निस्केपछि आफैं निभ्नेलगायतका प्रबिधि थप गर्न सकिन्छ । ५ फिट लम्बाइ र ३ फिट चौडाइका हरेक शौचालय कोठाले बिद्यालयको वातावरणीय सुधारमा सहयोग पु¥याउने बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेश डंगोलले आशा छ । बिद्यालयमा पर्याप्त शौचालय हुनुले शैक्षिक वातावरण पनि तयार हुन्छ, उहाँको भनाइ छ । यस बिद्यालयमा ५०० जना बिद्यार्थी छन् । उनीहरुका लागि पर्याप्त शौचालय थिएन । छात्राहरु शौचालयको प्रयोग प्रति संकोच मान्थे, बिद्यालयका प्रधानाध्यापक सतेन्द्रलाल कर्णले यसको दिगो उपयोग बिद्यालयको दायित्वमा आएको बताउनुभयो ।
गाँस, बास र कपासलाई मानवीय आधारभूत आवश्यकताका बस्तुका रुपमा लिइन्छ । यो पुरानो कुरा भयो । कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा कोवास्ट्रोका प्रबन्ध निर्देशक अजय दुरामीले — शौचालय नभए मानिसको आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुने बताउनुभयो दुरामीकाअनुसार यी शौचालयको न्युनतम आयु ४० बर्ष हो । यसको पर्खाल इटाभन्दा टिकाउ हुन्छ ।
अहिले जनप्रभातसहित २ वटा सामुदायिक बिद्यालय, ५० वटा व्यक्तिगत घर र ३ वटा सार्वजनिक गरी ५५ वटा यस्ता शौचालय निर्माण हुँदैछन् । वातावरणमैत्री र बलियो हुने भएकोले मात्र होइन । सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाको सहभागितामा निर्माण भएकोले पनि यस प्रकारको साझेदारिता सिकाइ बन्न सक्ने देखिएको छ ।
सम्पदा मार्ग गुरुयोजना सार्वजनिक ः संस्कृतिको संरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जनमा सुधार मुख्य दृष्टि Previous Post
योजना माग गर्न, महानगरबासीलाई बैशाख १२ गतेसम्मको समय Next Post
“स्मार्ट ट्वाइलेट” निर्माण तथा सञ्चालन अध्ययन गर्न २ वटा कार्यदल गठन